Muqdisho: Labo Isbitaal oo xalay dab qabsaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
21st March 2016 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Waxaa xalay xilliyo kala duwan dab qabsaday Isbitaallada Banaadir iyo Madiino oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Xalay fiidkii ayaa waxaa uu dab ka kacay labo bakhaar oo lagu keydiyo daawada Isbitaalka hooyada iyo dhalaanka Banaadir.
Dabkan ayaa gebi ahaanba baabi’iyay labadaas bakhaar wixii daawo ee ku jiray, waxaana mar dambe u soo gurmaday gaadiidka dab damiska Gobolka Banaadir, kuwaasoo ku guuleystay inay damiyaan.
Masuul ka tirsan maamulka isbitaalka Hooyada iyo dhalaanka Banaadir ayaa sheegay in dabka ka kacay bakhaarka keydka daawada uu baabi’iyay daawadii keydka, waxaana uu xusay in illaa 30-tan daawo caruurta loogu tala galay ay bas-beeshay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in maalin walba uu Isbitaalka daaweyn jiray illaa shan boqol oo caruur ah, waxaana uu ugu baaqay Hey’addaha sama falka inay Isbitaalka la soo gaaraan daawooyin.
Waxaa Isbitaalkas u gurmaday Waaxda Dab-damiska Gobolka Banaadir, taasoo ku guuleysatay iney dabkaas baqtiiso.
Agaasimaha Waaxda Debdamiska Dowladda Hoose, C/llaahi Maxamed Saneey oo u waramay Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa xaqiijiyay in dabka uu baabi’iyay laba baqaar oo dawada lagu keydiyo.
Agaasimaha ayaa sheegay in kooxda dab-damiska gobalka Banaadir ay ku guuleysteen in dhismaha Isbitaalka ka badbaadiyaan inta uusan dabku ku fidin.
“Waqti dambe ayaa nala soo gaarsiiyay in uu dab qabsaday baqaarada lagu keydiyo dawada ee cisbitaal Banaadir, si deg deg ah ayaan uga jawaabnay, nasiib darro farriinta oo waqti uu dabku qasaare geystay ayaan goobta gaarnay, waxaan ugu dambeyn ku guuleysanay in qasaaraha dabka aan ku koobno labada baqaar oo mid kamid ah uu horteen basbeelay” ayuu yiri Saneey.
Agaasimaha waaxda Dab-damiska Dowladda Hoose ayaa sheegay in dabkaasi loo maleeynayo in uu sababay Qalad ka dhashay dhinaca Korontada.
Dhanka kale, abaarihii salaadii subax ee saaka ayaa waxaa uu dab ka kacay Isbitaalka Madiina, waxaana uu dab ka kacay qeybta saalada qaliinka Isbitaalka, waxaana dabkaas uu waxyeelo u geystay qolalkii saalada qaliinka iyo alaabtii ku jirtay.
Lama oga illaa iyo hada waxa keenay dabkan, balse waxaa loo maleynayaa inay ka dhalatay cilad dhanka korontada ah.
Labada Isbitaal ee xalay dadku qabsaday ayaa aad isugu dhow, waxaana farta lagu fiiaqayaa in mid kasta dabka ka kacay oo ka dhashay cillad koronto.
Puntland oo u magacbixisay dagaalka ay kula jirto Alshabaab